लघुकथा : गठबन्धन • Janaboli
लघुकथा : गठबन्धन
‌म विदेशबाट दुई महिनाका लागि नेपाल जाँदा गाउँमा पहिलेको झैँ सुनसान नभई चहलपहल थियो । ८० वर्षकी हजुरआमाले नजिकै आएर सोध्नुभयो – “नानी ठूलो चौरमा बाजागाजा सहित अबिर, फूलमाला पहिरेर रक्षाबन्धन हो कि केकेे जाति भन्दै हिँडिरहेछ्न् । श्रावण भदौमा पो पर्थ्यो होइन र ?”‌-“बुढिमाऊ जनैपूर्णेको कुरा होइन गाउँमा चुनाव लागेको छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धन , वामपन्थी गठबन्धन दुई पार्टीमा विभाजन भएका
‌छन् रे ।” मेरी आमाले हाँसो रोक्न नसकी भन्नुभयो ।
‌- “ए…..तल्लो घरको रामे त्यही भएर गाउँमा झुल्केको रहेछ । चुनावमा भोट हाल्न मलाई बोक्न आउनेलाई यसपालि लोप्पा खुवाएर पठाइदिन्छु ।” -हजुरआमाले राता राता मुख पारेर खोक्दै भन्नुभयो ।
“हजुरआमा ! हामी यो देशका नागरिक भएपछि सही मान्छेलाई भोट हालेर आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।´´ मैले सम्झाउदै भनेँ ।” सुकिलामुकिला, चिल्लाचिप्ला कुरा गर्नेलाई दिएको हो, त्योभन्दा राम्रो अब कस्तालाइ दिनू ???” हजुरआमाले ओठ लेपार्दै भन्नुभयो । ‌ठूलो चौरमा थरीथरी नेता आएर भाषण गर्थे । इमानको राजनीति गरौँ, निष्ठाको राजनीति गरौँ ।” नेताले भाषण गरेको हाम्रो घरसम्म प्रस्ट सुनिइरहेको थियो । त्यो सुन्नासाथ मेरी हजुरआमालाई के भयो कुन्नि पड्किन थाल्नुभयो। ‌- “लाज पनि कति पचाउन सकेका लबस्तराहरू ! जति पनि ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन् हाम्रै पालाका हुन् । त्यही पनि नेपाल बन्द गरेर तोडफोड पारेर देश नङ्ग्याए । धरहरा ढलेको यतिका वर्ष भो … ।” के के भन्दै हजुरआमा अर्को कोठातिर लाग्नुभयो । मैले र आमाले मुखामुख गर्‍यौँ । उहाँ राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्केको हुनाले उहाँले निदाउरो मुख लगाउँदै भन्नुभयो – “देश कहिले दक्षिणको भरमा चल्छ कहिले भने उत्तरको इशारामा ! नेपालआमाले सधैं बैसाखीकै भरमा उभिनु पर्नेभो ।”
‌ – “च्याउ उम्रेसरि खोलेका राजनीति पार्टी रातारात मिलेर सेतोमा परिणत भएका छन् ! कतै कालो भएर त निस्किदैनन् नि ? ” मैले आमालाई सोधेँ । “यी सबै चुनावी दाउपेच हुन ।चुनाव सकिएपछि भागबन्डा नमिलेर फेरि टुक्राटुक्रा नहोलान् भन्न सकिन्न ´´-आमाले पुर्पुरोमा हात राख्दै भन्नुभयो। ‌- “मिलेर देश चलाउनु राम्रो कुरा हो तर उही मान्छे नै त छन् । के यिनीहरू अरूलाई हाकिमको कुर्सीमा बसाएर आफूले चलाइरहेको दोकान बन्द गर्न तयार होलान् र ?” मैले आमालाई सम्झाएँ जस्तो गरी तिनै राजनीतिक दलहरूप्रति प्रश्न तेर्स्याएँ
कविता : आमाको सम्झनामा